यो हो राधेमा देखिएको गम्भिर गल्तीFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
यो हो राधेमा देखिएको गम्भिर गल्ती
काठमाडौ । आगामी बैशाख १ गतेबाट प्रदर्शन हुने तयारी गरिरहेको चलचित्र राधेले केही दिन अगाडी मात्र मलाई माफ गर बोलको गीत सार्वजानिक गरेको थियो । तपाईहरुले पनि पक्कै गीत हेरिसक्नु भयो होला ? राम्रो लाग्यो होला । कति कुरा नोटिस गर्नुभयो कति कुरा गर्नु भएन होला । गीतमा एउटा गम्भिर गल्ती देखिएको छ । तपाईले देख्नु भयो की भएन ? हेर्नुहोस् यो फोटो ।
फोटो हेरिसकेपछि तपाईले केही कुरा त पक्कै थाहा पाउनु भयो होला । एउटै लोकेशनमा एउटै परिवेशमा उही कलाकारमा खिचीएको यो गीतमा यस्तो गल्ति कसरी हुन्न पुग्यो । गीतका कोरियोग्राफर रामजी लामिछानेको आँखा कता थियो त्यतिबेला जसले यस्तो गम्भिर गल्ती हुन पुग्यो । गीतमा प्रियंकाको हातमा निखील उप्रेती पात्रको नाम राधे लेखिएको छ । केही क्षण पछि उक्त नाम कहिँपनि देखिएको छैन । तर प्रियंकाको ढाडमा जलपरीको पिक्चर्स जहिले देख्न सकिन्छ । यहाँबाट थाहा हुन्छकी त्यो स्थायी थियो । राधे लेखिएको अक्षर चलचित्रका लागि लेखिएको थियो र कन्टिन्युटि सम्झन नसक्दा गल्ति हुन पुग्यो । चलचित्रमा देखिनै नहुने यस्तो गल्तीले चलचित्रको स्तरलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।
यदि यो गल्ती गीतमा नभई कुनै सिनमा भएको भए के हुन्थ्यो ? अथवा एउटै सिनमा हिरोईनलाई भेट्न हिरोले शुरुको शटमा उहि ड्रेस र समयमा कारमा आएको देखिने र दोश्रो शटमा उही ड्रेस र उही समयमा बाईकमा आएको देखाउने हो भन्ने कस्तो सिन बन जाँला । हो यहि प्रकारको गल्ती नै हो राधेको गीतमा देखिएको यो गल्ति पनि ।
हाम्रो सञ्देश पुनः यस्ता गल्तिहरु नेपाली चलचित्रमा नदोहोरीयोस् भने हो । ताकी यो गल्तीलाई कोट्याउने हैन । हुन त यस अघि पनि रामजी लामिछानेकै कोरियोग्राफी रहेको चलचित्र निर्भयको खुल्लम खुल्ला प्यार गीतमा तामिल चलचित्रको कोरीयोग्राफी चोरिएको थियो । यसरी पछिल्लो समय कोरियोग्राफर रामजी लामिछाने विवादस्पद हुदै आएको छ ।